ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Vagadziri, Vatengesi - China ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
24 ~ 36 padiki garo fusion muchina
Kunyorera uye Feature ► Inokodzera bota kuwelda yepurasitiki pombi uye zvigadzirwa zvakagadzirwa ne PE, PP uye PVDF zvinhu. ► Inosanganisira yakakosha furemu, hydraulic unit, kuronga chishandiso, kudziyisa ndiro, tswanda & sarudzo sarudzo. ► Inobviswa PTFE yakavharwa kupisa ndiro ine yakanyanya chaiyo tembiricha yekudzora system. ► Low kutanga kumanikidza chechokwadi yakavimbika nomoto unhu pombi diki. ► Chinogona kuchinjika chinzvimbo chinogonesa kuwedzeredza fittings dzakasiyana nyore. ► Yakakwirira chaiyo uye yekudzvinyirira kumanikidza mete ...
24 ~ 48 padiki garo fusion muchina
2 ~ 6 padiki garo fusion muchina
8 ~ 18 padiki garo fusion muchina
4 ~ 12 padiki garo fusion muchina